सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको नाफा ४ लाख ४२ हजार | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको नाफा ४ लाख ४२ हजार
लगानी 45 views
फागुन ११, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले माघ मसान्तमा रू. ४ लाख ४२ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । योजनाको नाफा गत मसान्तको तुलनामा घटेको हो । गत मसान्तमा योजनाको नाफा रू. १६ लाख ७२ हजार रहेको थियो । योजनाको प्रतिएकाइ खुद मूल्य रू. १० रहेको छ । पुस मसान्तमा प्रतिएकाइ खुद मूल्य रू. १० दशमलव शून्य १ रहेको थियो ।
योजनाले माघ मसान्तमा ४१ ओटा सूचीकृत कम्पनीमा कुल रू. १७ करोड १३ लाखभन्दा बढी लगानी गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्रमा सूचिकृत आईपीओ, एफपीओ, ऋणपत्र/बोण्डलगायत सार्वजनिक निष्कासनमा गरी रू. ३२ करोड ४६ लाख लगानी गरेको छ ।
योजनाको बैङ्क मौज्दात रू. १ अर्ब १६ करोड रहेको छ । योजनाको प्राप्त भइसकेको आम्दानी रू. १ करोड ७७ लाख र प्राप्त नभएको आम्दानी रू. १८ लाख ३० हजार रहेको छ । योजनाको व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:५२